Fibreglass ehanjiswayo ngqo isale i isiphathi silane-based and ehambelanayo ne resin unsaturated, IVinyl resin, kunye epoxy nentlaka. Oku kusetyenziswa ukuvelisa gratings, iintonga ezahlukeneyo kunye profiles.
1. fuzz Minimal ngexesha phambili
2. Fast zimanzi-out kunye ezimanzi-nge
3. ifayibha usasazeko Good kunye neempawu aphezulu edityanisiweyo ngomatshini
4. imicu lula kuvulwa ukuba bazilahle zixhobo zabo otheni ukusebenza
5. amandla High
6. Nkqu intlawulo nengxabano
7. izinga eliphantsi lingonakali owomileyo phezu points contact Creel
isebenzisa eziphambili ziquka nokuveliswa imibhobho zu of ngobubanzi ezahlukeneyo, imibhobho eliphezulu-uxinzelelo kohlelo yepetroleum, yogcino, amatanki okugcina, yaye, izinto ezisongwayo ezifana ngeentonga eluncedo kunye usambathisa ityhubhu.
Fibreglass awayeyabula - Ezi mveliso iincam ezininzi Fibreglass ngokuqhubekayo (Splice free) vulu filament ukuqhubekekiswa phezu ekwazi zentsimbi umthamo omkhulu. Ukusekelwa iglasi elithile zintsonkothe ngokwendalo kwaye zifuna iimeko processing ngqo. Le mveliso ifumaneka iifayibha ezifana Kevlar, kunye nezinye ARAMIDS. Ukusebenzisa kwabo iphambili na iingcingo ucinezelo izithuthi nje izinto ezingundoqo kunye neengcingo lomnxeba. Fibreglass ukusekelwa usondeze ucingo & cable kwimarike umgangatho ophezulu, ukusebenza eziphezulu nexabiso-olusebenzayo.
Fibreglass awayeyabula luhlobo iglasi ifayibha ezizodwa ukuba sixhathise ukhukuliseko kwezinto obrak ezifana lwesamente. Ingasetyenziswa ukubethelela isamente (GRC), gypsum kunye nezinye izinto ezingaphiliyo organic, yaye ilungele for steel kunye asbestos kwi non-umthwalo-obuvelisa amacandelo isamente ezizezinye. ukusebenza Product ngokungqinelana nemigangatho yesizwe kunye noshishino, ukumelana kwealkali ukuhlangabezana United States PCI (Prestressed Society eziphathekayo) kunye neemfuno International GRC Association.
Direct awayeyabula iyahambelana kunye nentlaka thermosetting, ezifana ipholiyesta unsaturated, IVinyl uEster, epoxy kwakunye nentlaka izakhi.
Direct awayeyabula yaye isetyenziswa ngokubanzi filament widing kunye Pultrusion, ukuvelisa ehanjiswayo ephothiweyo kunye amalaphu multiaxial. Isicelo zinemibhobho zu, yogcino, grille, amatanki imichiza njalo njalo.